Imigaqo yokusebenza - Jinghui Environmental Technology Co., Ltd.
Nature eyona eyiyo iindlela Ukupholisa kuya komphunga amanzi. Ukupholisa Evaporative isebenza kumgaqo ukufakwa ubushushu yi ukufuma ngumphunga. Oku kuyenzeka kwisikhumba babantu, ngokubila umzimba ukuze uphole lobushushu. Le nkqubo efanayo njengoko uziva ezipholileyo xa umoya uvuthuza ukusuka elwandle.
JH ukuphola evaporative uvelisa Ukupholisa ngempumelelo ngokuhlanganisa komphunga-ne zendalo inkqubo-amanzi inkqubo air-uhambisa elula, ethembekileyo. umoya wangaphandle ahlambulukileyo kuhluzeka eendaba evaporative ifumile, lupholile ngumphunga, kwaye yajikeleziswa yi blower.
JH Iicooler evaporative zezona zona kwiindawo ezinkulu ezivulekileyo. iindawo Cool ezinkulu ezifana izitora, sibukela kwiziganeko zemidlalo, zokugcina, iindawo ivenkile, iindawo ibandla. injini Evaporative idini indlela esezantsi-iindleko moya emoyeni. Kulula ukuliseka phezu kodonga, ifestile kunye nophahla, ondle zokupholisa, kodwa umoya olungileyo. Baya simoly usebenzise umthombo wamanzi yangaphakathi okanye yangaphandle ukunika zokupholisa.